SAWIRRO: Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo heshiis cusub gaaray & qodobbo xasaasi ah oo la isla meel dhigay! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta SAWIRRO: Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo heshiis cusub gaaray & qodobbo xasaasi...
Nairobi (Halqaran.com) – Madaxweynaha JF Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan miro dhal ah la qaatay dhiggiisa dalka Kenya, Uhuru Kenyatta oo ku soo booqday hooyga Madaxweynuhu uu ku degan yahay magaalada Nairobi.
Madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay in ay muhiim tahay in Dacwadda Badda ee taalla Maxkamadda Caddaaladda Adduunka aysan wax saameyn ah ku yeelanin xidhiidhka wanaagsan ee labada dal, ayna Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxeeyaan dano badan oo wadaag ah oo faa’iido u leh labada dowladood iyo labada shacab.
Sidoo kale, madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa uga mahadceliyey Madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisa ka qeyb galkooda shirka Nairobi, isagoona tilmaamay in ay ka go’an tahay xoojinta xiriirka soojireenka ah ee ka dhaxeeya labada dal ee dariska ah.
Kulanka kadib waxay ku heshiiyeen labada madaxweyne:
In Duulimaadka tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi lagu soo celiyo toos (Wajeer aan la soo marin) muddo toddobaad ah.
In muwaadiniinta wata baasaboorrada Rasmiga ah (Service iyo Diplomat) Fiisaha Kenya ay ka qaataan Garoomada Kenya (On arrival)
In kiiska Badda ee ICJ yaalla uusan saammayn xiriirka labada dal.
duulimaad toos ah
heshiiska ay wada gaareen Madaxweyne Famaajo iyo Uhuru Kenyatta
Muqdisho to Nairobi